Munaasabad xarigga looga jarayay garoon kubada kolayga ah oo lagu qabtay Gaalkacyo (Sawirro) – Radio Muqdisho
Waxaa soo dhammaaday tababar ay qaadanayeen macallimiinta ugsiyada Gaalkacyo,Waxuuna la xiriiray sharuucda kubadda Koleyga oo la rabo tartamo la xiriira inay ka billowdan gobollada Puntland.
Qorsha lugu soo celinayo tartamada kubadda Koleyga Puntland,waxaa uu yimid kaddib booqasho ay ku yimaadeen Puntland Maxamed Madoobe,Cabdirisaaq Marayare oo ka mid ah ciyaartoydii Soomaaliya waqtiigii dowladii dhexe ee kubadda oleyga.
Labadan ciyaar-yahan waxaa waheliyay macallin Cali Aaamin oo bixinayay tababaradda kuadda Koleyga.
Tababar maalmo qaatay ayey ku soo dhammeeyeen dugsiga sare ee Cumar Samatar,waxaana ka qayb-galay macallin ka sooctay dugsiyada waxbarashada gobolka Mudug.
“Si wanagsan ayuu ku soo dhammaaday tababarkii ka socday Gaalkacyo,waxbadan ayaana ka korarsanay,”ayuu yiri macallin ka qayb-galay tababarka.
Maxamed Madoobe oo ka mid ahaa ciyaratoydii Soomaaliya ayaa sheegay in la baray macallimiinta ka qayb-gashay tababarka qaabka loo maamullo kubada koleyga iyo sharuucda lagu dhaqmo.
Munaasabad kooban oo ka dhacday garoonka kubadda Koleyga ee Cumar Samatar oo dibu habeyn lugu sameeyay ayaa shahaadooyin lugu siiyay macallintii ka qayb-gashay tababarka oo dhowr maalin socday.
Mas’uuliyinta gobolka,degmada,maamulka dugsiga Cumar Samatar,wasiirkii hore ee haweenka Caasho Geelle iyo xubno kale oo ka socday bulshada qaybaheeda ayaa ka qayb-galay munaasabad kooban oo loo qabtay
macallimiintii ka qayb-gashay tababarka.
Guddoomiyaha Isboortiska Cabdi-hodon Dayax-leef,guddoomiyaha xiriirka kubadda Koleyga gobolka Mudug,xog-hayaha kubadda koleyga gobolka Mudug ayaa hadallo ay jeediyeen waxaa ay soo dhaweeyeen soo oqshada kubadda Koleyga ee Puntland.
“Waxaan u mahadcelinayna mas’uuliyinta Cumar Samatar oo marti galiyay tababarkii maalmaha qaatay,iyo dibu habeynta garoonka kubadda gacanta ee Koleyga,aad ayaan usoo dhaweynayna Maxamed adoobe,Cabdirisaaq Marayare oo gartay inay u faa’ideyaan dalkooda,”ayuu yiri guddoomiyaha isboortiska gobolka Mudug.
Mas’uuliyinta gobolka iyo kuwa degmada oo ay wahelisay wasiirkii hore ee haweenka Puntland ayaa dhankooda u mahadceliyay Maxamed Madoobe,Cabdirisaaq Marayare oo dalka dibaddisa uga yimid sidii loo soo celin laha isboortiska Puntland.
Intaas kaddib waxaa abaal marino la siiyay Maxamed adoobe,Cabdirisaaq Marayare oo ay dadkii ka soo qayb-galay munaaabada ugu mahadceliyeen sida ay u garteen dalkooda inay ku soo laabtan.
“Annaga oo aysan cidna na taageereyn ayaan garanay dalkeena inan wax tarto waxii an awoodno,waxaana ku fikirnay inan ka shaqeyno soo celinta isboortiska,gaar ahaana kubadda Koleyga maadaama an horay u ahayn ciyaar-yahanno kubadda Koleyga ah,”ayuu yiri Maxamed Madoobe oo si cad u sheegay si wanagsan in loogu soo dhaweeyay Gaalkacyo.
Maxamed Madoobe,Cabdirisaaq Marayare ayaa u ambaxay magaalada Garoowe halkas oo si weyn loogu soo dhaweeyay,waxaana lugu wada inay billaaban tababarro la xiriira barashada kubadda Koleyga iyo sharacdeeda.